Fanambarana avy amin’ny Hetsika Vonjy Aina - rov@higa
Fanambarana avy amin’ny Hetsika Vonjy Aina
10 Juin 2011, 22:49pm
Publié par Vonjy Aina
Tsy ho voalefitra ela intsony izao krizy miha mahazo faka lalina amin’ny Malagasy izao, ka tsy maintsy ilàna fanàfana haingana.
27 volana izao no niezaka sy nanao izay ho afany tamin’ireo andrana maro samihafa fa tsy nahitam-bokatsoa araka ny niheverana azy ireo ankolafin-kery misy eto.
TETEZAMITA TENA IZY tsy miandany no sahaza sy mendrika ny Malagasy.Tsy lany olomanga ny firenena fa manana ny zanany manam-panahy, manam-pahendrena. Olona vonona sy tò teny afaka handamina ary handravona izao savorovoro mandazo ny mpiray tanindrazana izao no takian’ny zava-misy ankehitriny. Olona manana traik’efa sady manam-piniavana hamerina amin’ny laoniny ny fifandraisana amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Iarahan’ny rehetra miaiky fa ny fifidianana demokratika voaomana araka ny tokony ho izy,madio, mangarahara, mamoaka voka-pifidianana eken’ny rehetra no hiverenana amin’ny ara-dalàna. Ilaina araka izany ny fananganana CENI mahaleo tena hikarakara fifidianana sy ny fiaraha-manatanteraka amin’ireo vondrona iraisam-pirenena amin’ny lafiny rehetra mba ahalavorary izany.
Mitaky fitoniana politika sy fandriam-pahalemana mialoha anefa ny fanatontosana ny fifidianana. Antoka iray lehibe hisian’izany fitoniana izany ny fiveranan’ireo Filoham-pirenena teo aloha an-tanindrazana satria Raiamandreny voafidim-bahoaka teto izy ireny. Lalana tsy azo ihodivirana ao anatin’ny tetezamita tena izy rahateo ny fifamelana sy fifampihavanana.Manana ny andraikiny manandrify izany ireo Raiamandreny am-panahy sy Olobe manerana ny nosy.
Matoky ny herim-panahin’ny Malagasy hiara-mientana amin’ny famonjena ity firenena ity.